न त भवन फोम बिना गर्न सक्नुहुन्न। यो अचम्मको सामाग्री विभिन्न सतहहरु पालना र राम्रो ध्वनि र गर्मी इन्सुलेशन, कठिन ठाउँमा मुहर क्षमता छ। कसरी सुक्खा फोम? तपाईं जवाफ थाहा अघि, तपाईं आफ्नो संरचना र मुख्य प्रकार परिचित गर्न आवश्यक छ।
माउन्ट फोम polyurethane आधारित एक-घटक सीलेंट भनिन्छ। यो असम्भव छ बिना ढोका, Windows र विभिन्न मरम्मत प्रक्रियाहरू को स्थापना गर्न किनभने त्यो ठूलो माग छ। किनभने कुनै पनि संयन्त्र वा ऊर्जा स्रोतहरू आवश्यकता छैन सामाग्री संग काम, धेरै सुविधाजनक छ। कुनै कुरा को फोम ( "Makrofleks", "टाइटन", आदि) प्रयोग भएको छ के - यो सबै ठाउँ pervades र केही घण्टा पछि, पूर्ण निको पार्नुभयो।
यो एक तरल prepolymer र propellant रूपमा सिलिन्डरहरु मा आपूर्ति गरिएको छ। सामग्रीहरू को रिलीज पछि सुरु भएको polymerization प्रतिक्रिया हावा र सतह मा उपचार गर्न चिस्यान गर्न पत्राचार जो लन्च लागि।
तपाईं कत्तिको फोम dries पत्ता अघि, यसको अचम्मको सुविधाहरू थाह गर्न आवश्यक छ।
प्रारम्भिक विस्तार - तुरुन्तै आवेदन पछि वृद्धि फोम मात्रा। यो सुविधा सामाग्री सबै ठाउँ कब्जा र विश्वसनीय लक रूपमा सेवा गर्न अनुमति दिन्छ।
माध्यमिक विस्तार - नकारात्मक विशेषता, भोल्युम परिवर्तन (या त वृद्धि वा कमी) पालना गर्छन देखि फोम। यो कारणले गर्दा गलत प्रयोग यसलाई (एक वृद्धि तापमान शासन, को कच्चा आधार, यांत्रिक प्रभाव मा) गर्न उत्पन्न हुन सक्छ।
solidification दर। कसरी सुक्खा फोम? 24 घन्टा - सतह पत्र सुक्खा लागि आवश्यक 20 मिनेट र पूर्ण उपचार लागि हो। अतिरिक्त सामाग्री मात्र4घण्टा पछि कटौती गर्न सकिन्छ।
आसंजन - विभिन्न सतहहरु फोम को आसंजन डिग्री। त्यो राम्रो, काठ, ठोस, धातु, प्लास्टिक, पत्थर र ग्लास निर्माण गर्न "sticks"। तर, वजन गरिबी यति मा सिलिकन, पलीथीन पालना र। एन
गंभीर तापमान परिवर्तन गर्न प्रतिरोध। उदाहरणका लागि, फोम "Makrofleks" -55 +90 डिग्री देखि सामना गर्न सक्छन्। आगो को प्रभाव सन्दर्भमा, यो गर्न प्रतिरोधी छ र दहन समर्थन गर्दैन।
पराबैंगनी प्रकाश संग अन्तरक्रिया। आधार फोम रसायन गर्न जोखिम withstands, तर गाढा र सूर्यका नाश छ। समस्या मसी वा प्राइमर को रूप मा एक सुरक्षा तह लागू गरेर हल छ।
को फोम को आवेदन को आधारमा व्यावसायिक र उपभोक्ता छ। प्रयोग को तापमान अनुसार, यो गर्मी, जाडो र सबै-सिजन विभाजन गरिएको छ। व्यावसायिक संरचना यो (एक बेलुन मा विशेष वाल्व छ) एक बन्दूक संग लागू हुन्छ मा विशेषता। किन एक पेशेवर भनिन्छ? किनभने बन्दूक धेरै महंगा फोम (10 पटक) छ, र यो एकल प्रयोग (मात्र व्यवसायीक प्रयोग) को लागि यो किन्न कुनै अर्थमा बनाउँछ।
फोम विधानसभा (माथि प्रस्तुत जानकारी) कुनै पनि उपकरणहरू बिना प्रयोग घरेलू लेख। यसको लागि प्रत्येक बोतल मा उपस्थित जो एक विशेष स्प्रे ट्यूब, आवश्यक हुनेछ।
गर्मी फोम सतह जसको तापमान 50 छ ... + 350 डिग्री लागू हुन सक्छ। अपरेटिङ तापमान जाडो सामाग्री - -180 +350 डिग्री देखि। यस मामला मा, चित्रकला र विस्तार पछि यसको मात्रा घट्दै तापमान संग घट्छ। सबै-मौसम फोम दुवै गर्मी र जाडो संस्करण को सबै भन्दा राम्रो गुण छ। यसलाई कम तापमान मा र उच्च उपज र तीव्र solidification मा काम गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी प्रयोग गर्ने र धेरै सुक्खा फोम कसरी?
यसलाई मानिन्छ विशेष गरी अचम्मको इन्सुलेट सामाग्री, डिजाइन गरिएको छ जो:
unheated कोठा, छत कोटिंग्स मा चर्किएको भर्नु;
विभिन्न ट्यूब, ढोका र Windows वरिपरि अंतराल भर्न;
थप फास्टनरों बिना ढोका र Windows को फिक्सिंग;
थर्मल इन्सुलेशन सामाग्री को पर्खालहरु गर्न संलग्न;
। पाइप, हावा कंडीशनर, डाकू र जस्तै घ को इन्सुलेशन।
मरम्मत ठाउँ मा व्यापक आवेदन;
डुङ्गा, rafts र टी मा अंतराल भर्नु। डी।
भौतिक राम्रो आफ्नो उद्देश्य पूरा र सकेसम्म लामो समयसम्म सेवा छ, तपाईं हुनुपर्छ:
को seams र 80 मिमी गर्न भट्ठा को चौडाई मुहर गर्न (ठूलो अंतराल पहिलो बोर्ड, इँटा भरिएका हुन्छन्);
राम्रो आसंजन (आवेदन पहिले र पछि) को लागि पानी सतह छिडकना;
सञ्चालन अघि बोतल शेक र उल्टो यो पकड;
पूर्ण जसबाट फोम को खपत कम अंतर (1/2 वा 2/3), भर्न छैन;
polymerisation पछि अतिरिक्त कटौती (पूर्ण solidification समय - 24 घण्टा);
सूर्य कुनै पनि रंग को सतह रक्षा गर्न;
ज्ञात ब्रान्ड मात्र उच्च गुणस्तरीय उत्पादन प्रयोग गर्नुहोस्।
750 एमएल संरचना संग सिलिन्डरहरु सामान्यतया 50 एल को उपज छ। तर तिनीहरूले pyatidesyatilitrovuyu क्षमता भर्न सक्छन् कि होइन। को फोम किनभने बुलबुले को ठूलो रकम को अस्थिर हुन मानिन्छ। तल्लो तहहरू यसको आफ्नै वजन अन्तर्गत यो कम मात्रा परिणामस्वरूप, फुट्छ। यस सन्दर्भमा ससर्त pyatidesyatilitrovy उत्पादन दर, खाली भर्नु अधिक छैन 20 मिमी चौडाई गर्दा साँचो हो जो मानिन्छ।
प्रत्येक सिलिन्डर जो हावा संग प्रतिक्रिया मा स्पेस 50 लिटर ओगटेको एक विलायक र द्रवीभूत फिलर ग्याँस मा polyurethane भरिएको। भौतिक कम तापमान मा प्रयोग गरिएको छ भने मात्रा कमी उत्पन्न गर्न सक्ने कृपया सजग हुनुहोस्। फलस्वरूप, लेबल मा संकेत फोम को खपत, केवल आदर्श अवस्थामा वास्तविकता पारस्परिक रहेको छ।
सामाग्री चयन गर्नु अघि, यो जो अन्तर्गत काम गरिनेछ अवस्थाको निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यो पनि यसलाई प्रयोग गरिनेछ के को लागि महत्वपूर्ण छ: छाप, soundproofing, गर्मी इन्सुलेशन वा स्थापनाको लागि। जब तपाईं किन्न फोम विधानसभा उत्पादन भएको थियो के ध्यान गर्नुपर्छ। ग्राहक समीक्षा, को टाइटन ब्रान्ड, Soudal, Penosil, Makroflex हेर्न।
डिजाइन लागि जाँदा, त्यसपछि, उदाहरणका लागि, कुनै पनि फोम प्लास्टिक Windows को लागि उपयुक्त छ, तर विशेषताहरु छ संग परिभाषित गर्न। सर्वश्रेष्ठ सामाग्री पेस्तोल लागू, तर यो एकल प्रयोगको लागि प्लास्टिक ट्यूब मा रहन सक्छ। तपाईं ठूलो क्षेत्रमा प्रक्रिया छ भने, यो विशाल ट्यांक मा एक पेशेवर तयारी चयन गर्न आवश्यक छ।
के ओभन सौना छनौट गर्न?
बुढ्यौली को एक तरिका रूपमा काठ लागि Mordant
Falshbalki छत: के सामाग्री चयन गर्न?
जुत्ता रैक। हामी हलवे सुसज्जित
ठीक परिष्करण - यो के हो?
सिनेमा (क्रास्नोडार) "लाल वर्ग"
मूल्य ट्याग लागि Labellers: वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
5 अक्टोबर मा दिन नाम। चर्च पात्रोमा दूत दिन
Patrik Sueyzi: मूर्ति, नर्तक र अभिनेता। "फोहर नृत्य" - सबै भन्दा राम्रो नृत्य melodrama
यो के हो - व्यवसाय यात्राहरू काम?
HTC एक वी विशेषताहरु, वर्णन, समीक्षा, मूल्य। HTC इच्छा वी सुविधा र समीक्षा
आफ्नो हातले कोण grinders लागि खडा (फोटो)
एक घर सजावट कसरी सुरु गर्न
1962 मा पाकिस्तान को इतिहास
Erarta - संग्रहालय आधुनिक कला को। संग्रहालय समकालीन कला Erarta को
विशेष चयन र प्रयोग: स्नान लागि इन्सुलेशन